Tenga Tadalafil poda (171596-29-5) -Manufacturer & fekitori
Rating: SKU: 171596-29-5. Category: Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni
Tadalafil powder, iyo yakasvibirira tadalafil, inorudzi rwepepuru yakachena, kazhinji yakashandiswa kuita tadalafil mapiritsi. Tadalafil drug, aslo inonzi / Cialis, imwe yekirasi yemishonga inonzi PDE-5 (Phosphodiesterase type 5) inhibitors.
MUTSVENE unobatanidza nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hwehu (Raw Tadalafil (Cialis) powder (171596-29-5)), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Raw tadalafil (Cialis) upfu Basic Characters
1.AASraw inopa Raw Tadalafil powder (Cialis powder), iyo inogona't inowanikwa nevakawanda nzira dzakajairika.
2.AASraw inopa mapeji akawandisa uye nhungamiro yekugadzirwa kwezvinhu zvisina kuonekwa (Cialis powder) Tadalafil powder.
Chii chinonzi Tadalafil powder
Tadalafil powder, iyo tadalafil yakasvibirira, rudzi rwehupfu chena, kazhinji yaishandiswa kugadzira tadalafil mapiritsi. Tadalafil drug, aslo inonzi / Cialis, ndeimwe yekirasi yemishonga inozivikanwa se PDE-5 (Phosphodiesterase mhando 5) inhibitors. Zvepabonde zvinowedzera Tadalafil / Cialis inozorodza mhasuru yetsinga dzeropa uye inowedzera kuyerera kweropa kune dzimwe nzvimbo dzemuviri. Tadalafil / Cialis uye imwe PDE-5 inhibitors inogona kubatsira varume vane erectile kudzvinyirira (ED) nekusimudzira mhinduro ye erectile kana murume akurudzirwa pabonde. Inoshandiswa kurapa erectile kusagadzikana (kushaya simba) uye zviratidzo zvebenign prostatic hypertrophy (yakawedzera prostate). Vanhu vanowanzo tenga tadalafil powder kubva pakuchenesa kwakanyanya tadalafil powder mupiki. Kunze kweTadalafil / Cialis, mimwe mishonga iri mukirasi iyi Viagra (Sildenafil) uye Levitra (Vardenafil), uye Flibanserin.
Tadalafil inoshandisa sei
PDE5 inyanzvi inowanikwa mune varume vazhinji vanotambura ne erectile dysfunction. Iyo inoderedza chimwe chinhu chakakosha zvikuru-cGMP, kana cyclic guanosine monophosphate, iyo inonyanya kukosha mukugadzirwa kwehutano hwakanaka. Kutenda kuCGMP zviratidzo kubva kumagumo ekupedzisira mumharapara yako inotanga kusunungurwa kwe nitric oxide, iyo, naizvozvo, inodzosera misidha yakanyorova ichikandira midzi yeropa mumapapiro ako. Semugumisiro, ropa rakawanda rinogona kuyerera kuburikidza navo, kuzadza zvivako zvema cavernous mumuviri wepente yako, zvichiita kuti zvive zvakaoma uye zvakagadzirwa. Kana pane PDE5 yakawandisa uye isingakwanisi cGMP, muviri wako haugoni kujekesa zviratidzo zvinouya kubva mumagariro ako ekuguma, izvo zvinoguma nekukwanisa kukwana kana kusakwanisa kuwana erection.
Paunotora 36-hour Cialis / tadalafil powder, inoderedza kushanda kwaP PDE5 muhutano hwako nokukurumidza, zvichiita kuti maitiro eCGMP adzokere kumazinga akaenzana munguva shomanana se15-45 maminitsi. Zvisinei, sezvo hafu yehupenyu hweTadalafil iri shoma, iyo inopera inopera mumazuva e2 kuita PDE5 kudzoka uye hutano hwako hwepabonde - huri kuwedzera. Pane kudaro, apo uri kutora pasi-simba simba Cialis / tadalafil powder zuva nezuva, zvinobatsira kuchengetedza hutano hwakanaka hweCGMP mumuviri wako, zvichikupa mukana wakamirira kwenguva refu wekunakidzwa zvepabonde zvakare. Zvinotora pasi-simba Cialis 4-5 mazuva kuti atange kushanda, saka usatarisira kuve maziso chaiwo mushure mekutora piritsi yekutanga. Zvisinei, chikamu chakanaka ndechekuti hauzombofi uine matambudziko mumubhedhazve - chero bedzi uchiramba uchitora Cialis / tadalafil powder zuva rega rega.
Nzira yekutora tadalafil powder zvakakodzera
Chinyoro Chakakosha: Cialis haifanire kutorwa nema nitrate nekuda kwekugona kwayo kudzikisa BP. MaNitrate haafanire kutorwa kweanenge maawa makumi mana nemasere Cialis isati yashandiswa nevazhinji vashandisi veNitrate inoda kudzivirira izvi neese maPED48.
Tadalafil powder's Chikumbiro chiri kutengeswa
Muchitoro chemunharaunda, kana muchipatara, tinogona kuona zviri nyore cialis, inova tadalafil. Ehe, iyi tadalafil powder - imwe yeanowanzo shandiswa inoitwa mushonga wekurapa ED, inowanzo iri muchimiro chemapiritsi kana mapiritsi, kuwedzera kune izvi, muchokwadi, tadalafil inoshandiswawo mune dzimwe nguva, se :
Tadalafil inogona kuwedzerwa kumakandi kugadzira macandi akajairika kusimudzira zvinodiwa nevarume pabonde. Kune akawanda mhando dzemasipi ezvepabonde muMalaysia, izvo zvinhu zvikuru zvinowanzoitwa tadalafil powder, uye sildenafil powder.
Mumusika, kune mamwe marudzi efivha yepabonde. Zvimwe Zvishandiso zvinowanzo ndezvi: Kokoti Muto, Uchi, Cinnamon, Kocoo, Maca.Kuva kahawa inononoka-rudzi rwekumwa neAztec rinoshandura. Iyo inonaka inenge yakakora, asi inotapira yakakwana yekufambisa kune imwe munhu inotapira. Kofi iyi yepabonde ine zvigadzirwa zvekuvandudza bhaibheri yako. Maca, Kocoo, Cinnamon, Uchi neKononti Muto pamwe chete anobatsira kusimbisa kubudisa mahomoni, kunatsiridza hutano hwakanaka, kunonoka kuenda kumwedzi, shuga shoma yeropa, kunatsiridza kugadzirisa nekuvandudza zvepabonde.
Kwatiri, dzimwe nguva kuitira kuve nemhedzisiro yakasimba kana kusasimba, tinogona kugadzira kofi yepabonde nekuwedzera bonde rinosimudzira poda tadalafil, zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi kuita akasiyana madhifi kofi.
How to buy Tadalafil powder; kutenga Cialis powder kubva kuAASraw